Ngaphezulu Russians ikhethe-ngqesho izibonelelo isebenza - Russia Ngaphaya
Ngaphezulu Russians ikhethe-ngqesho izibonelelo isebenza — Russia Ngaphaya
Nkqu nangona inani izithuba ezikhoyo kweli lizwe exceeds inani unemployed nge. times, abaninzi young abantu Us ikhethe ethabatha izibonelelo kunokuba isebenza. Iqwalaselekile kuza kukuba ubukhulu becala ebone kwi-ubuhlungu imimandla apho kuyenzeka ukuba subsist kwi-ngqesho izibonelelo. Kulo nyaka, isirussian colleges ungeniswa omtsha lokungena kuwo imisebenzi ingqokelela yamanani iingxelo: reluctant ukusebenza. Abaninzi graduates, emva kokufumana isiqinisekiso semfundo noqeqesho, musa nkqu zama landing umsebenzi, kodwa ngoko nangoko settle ekhaya, ukukhetha ubomi unemployed kunye nokuqinisekisa akukho azame ukufumana phandle ukuba nabasebenzi kwimakethi iimfuno kwabo. I-ubudala kwisizukulwana ayikho keen ukuba umsebenzi noba. Saratov ingingqi resident Svetlana Savelyev, wamxelela Novae Investee ukuba baphalaze wafumana-ngqesho izibonelelo kuba phantse ezintandathu sele: ngu nzima kakhulu ukuba ilizwe eliphezulu-ihlawulwe umsebenzi: kufuneka okulungileyo noqhagamshelwano kunye acquaintances. Andinguye ethabatha phezulu umsebenzi kuba, ukuba, robles (jikelele dollazi — dollazi angama-) ngenyanga. Ke, kokukhona advantageous ukuzoba nenzuzo ngexesha staying ekhaya. Ubukhulu intswela-ngqesho inzuzo yenza up, robles (ngaphandle kwe- dollazi) apho uthelekisa ukuba aqhuba inqanaba kwi-amaninzi amacandelo ahlukeneyo. Ngosizi, kuyinto uhlobo a ishishini kuba imimandla kunye eliphantsi avareji umvuzo: abantu bakholisa ukuba ukhetha-ngqesho izibonelelo kuba ekubeni unoccupied ukuba usebenzela ngocoselelo ngaphezulu yomvuzo, Rosinsky Gazeta wacaphula iqabane lakho le-Irhafu uvimba s inkampani Dmitry Lipitor njengokuba esithi. Nangona kunjalo, ngabo kodwa kuvavanya ukuba abanako ukufumana umsebenzi oko baya kufuneka akhuphe uxwebhu ebonisa ukuba umfaki-sicelo wenziwe asivunywanga yi-eziliqela abaqeshi. Amawaka unemployed ngempumelelo uzalise le nkqubo, lowo iqaphele. Ngenxa esele ikho indlela, engundoqo, abamkeli yentswela-ngqesho izibonelelo ingaba abahlali subsidized imimandla, apho kuyenzeka ukuba subsist kule paltry sum. Moscow izithuba imbali low-ngqesho umyinge ngonyaka, kwaye unyaka ngaphandle, nto leyo ngezantsi omnye umbhali. Kuya kwenzeka ntoni na ngoba kulula kuba abantu ukufumana uqeshiwe, kodwa ngenxa akunakwenzeka ukuba baphile nkqu ukuba omnye kuzoba ubukhulu intswela-ngqesho impahla, umncedisi unjingalwazi e isebe lezabasebenzi nentlalo-ntle umthetho Kitefin Moscow Urhulumente Umthetho Academy Nikita Lyadova wathi. Irashiya iye wolahleko — inkcubeko lezabasebenzi, ilungu Kirov iingingqi Zoluntu Kwegumbi Nikolai Pectin wathi. Emva nondefense iinkampani baba kuyivala phantsi kweli phondo, enkulu ngokwesiqu labasebenzi, kuquka highly-izakhono nezinamandla, kufunyenwe ngokwabo jobless: abantu abanalo adapted entsha iimeko ezininzi kubo kuba zange akhawunti entsha inyaniso. Abanye kufuneka ithathwe kwi-besela, abanye kuba ebhalisiweyo njengoko unemployed kwaye abanye baphile nge-casual imisebenzi. Ingcaphephe iqaphele zisasaza ezi-ngokuba yi-Italian syndrome kwi-Russia, apho unako-bodied abemi iphelelwe amathathu ukuba do hayi unqwenela ukuba umsebenzi kwi-siseko preferring yokuchitha ixesha ukuzonwabisa. Ianthe imbono opolitiko analyst Ruslan Garayev, isirussian urhulumente provokes oku parasitism, ngenxa endaweni ngokukhuthaza kulutsha ukusebenza, sifuna ukusebenza kwi-nabasebenzi umkhosi urhwebo lwangaphakathi, stimulating i-hiring ka-migrants ukusuka kwi-Central Asia ukwenza low-ubuchule imisebenzi.
Kukho imali, kakhulu. Kodwa abantu, ingakumbi youngsters, musa unqwenela ukuba umsebenzi atoll. Mna bayibone lonke ixesha kulo iintlanganiso kunye abafundi. Mna baxelele ukuba Sele ukuhlawula kodwa hardly anybody listens isininzi ngoko nangoko jika kwemiqolo yabo kwi kum, Nevi Investee cited entrepreneur Dmitry Yishuv njengokuba esithi. Le meko kukuba ebone onke amacandelo ahlukeneyo: xa ndiya kuhlangana kunye ushishino nabantu abadala evula indibano ebizwa, begcina complaining sinako ahlawule imali — okulungileyo imali — kodwa kukho akakho umntu emsebenzini.
Abantu ukhlala ekhaya
Ngaxeshanye, abasemagunyeni isicwangciso ukuthatha amanyathelo obulalayo oku loluntu dependence. Kubulungiseleli labasebenzi kwaye intlalontle intends ukuba thintela amathuba jobless Russians ukuba constantly abhalise imisebenzi neenkonzo ukuze zoba izibonelelo. Usekela-Mphathiswa labasebenzi kwaye intlalontle Tatyana Illinova wathi e iseshoni ye-Ikomiti kwi-ntlalo-ntle Polices phantsi Federation Ibhunga (ephezulu indlu Russian epalamente) ukuba wakhe isebe waba ucwangciso ukuzoba umthetho oyilwayo ukuze revise le ndlela ukuhlawula-ngqesho izibonelelo. Yena reminded ukuba isixa-mali eqhelekileyo kwaye ubukhulu intswela-ngqesho impahla waba ngonyaka fixed yi Russian kwi-government, kwaba kwaye, robles, ngokulandelelana kwayo. Regrettably, bamele iselwa low izixa-mali ukongeza, sinazo i-unjustifiably lengthy ixesha xa abantu afanelekile ukuba afumane-ngqesho izibonelelo, kwaye umthetho iindawo akukho izithintelo kwi repeating inkqubo phezu kwaye phezu kwakhona apho bamele-irejista, yayikukwenza kunye imboniselo ka-ukufumana izibonelelo, yena iqaphele. Ukuxhasa omtsha izilungiso kuwo, Tatyana Illinova kuchazwe ukuba inani izithuba kwi-Russia liwudlule inani unemployed nge.
Ngaphambi koko, Nabasebenzi Umphathiswa Maxim Plainspoken malunga necessity ukulawula intlawulo yentswela-ngqesho izibonelelo. I-komlinganiselo uza kusebenza hayi kuphela abo wishing to earn kwi izibonelelo kodwa kanjalo ukwaziswa enobulungisa-siseko intlawulo, kuxhomekeke ubude inkonzo, ubuchule kwaye forfeited umvuzo. Ngokunxulumene Nabasebenzi Kubulungiseleli, phantse u-thirds ka-Russians ebhalisiweyo e imisebenzi centres, lawula ukufumana imisebenzi emitsha, kwaye oku isibonisi ugcina lokukhula
Zonyango inkampani uludwe Us (isirashiya)